Fialam-boly - fitsangatsanganana ankohonana | Seymour, IN | Ivon-toerana mpitsidika an'i Jackson County
Jackson County dia manolotra traikefa nahafinaritra! Ala tsara tarehy, fialokalofan'ny bibidia nasionaly ary faritra fialam-boly ataon'ny fanjakana dia an-tongotra an-tongotra an-kilaometatra, bisikileta an-tendrombohitra ary lalana mitaingina soavaly, ary koa fanjonoana, fihazana ary fotoana fitobiana. Jackson County dia toeram-pilalaovana golf roa ary hetsika isan-taona eny an-kalamanjana.
Tsindrio eto raha hisintona ny Sarintany BIKE Jackson County "Get Out and Ride"
Tsindrio eto raha hampidina ny Jackson County Rec Rec Guide
Fialamboly ivelan'ny trano any Jackson County, IN
Jackson County dia manana hetsika isan-karazany fialamboly any ivelany. Na inona na inona vanim-potoana, misy zavatra mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny tsirairay.
Mitahiry ny ala sy ny natiora
Miaraka amin'ny farihy, ala ary ala maro an'arivony hekitara ao amin'io faritra io, Jackson County no toerana mety indrindra ho an'ireo tia natiora. Manasà bibidia isan-karazany manomboka amin'ny diera fotsy ka hatramin'ny vorondolo dia tongava mijery ireo tany arovana ireo ary manaova traikefa an-tsehatra amin'ny lafiny dia. Ny ala sy ny fiarovana anay dia hahafaly anao raha mitady fitsangatsanganana ianao na fotoana ahafahana mihaza sy manjono. Aza hadino koa ny mijery ireo lalan-bisikileta sy toby fitobiana maro mandritra ny fotoana maharitra. Ampidiro ary ampifandraiso amin'ny natiora satria natao hiaina izany!
Ny fitsangatsangana dia hetsika malaza ho an'ny mponina sy ny mpitsidika ny Jackson County. Izany dia noho ny fahafaha-manao be dia be ho an'ireo mpandehandeha amin'ny ambaratonga traikefa rehetra. Misy lalana an-tongotra an-tongotra 50 kilaometatra mahery any Jackson County eo anelanelan'ny ala Forest-Jackson State Washington, Muscatatuck National Wildlife Refuge ary Starre Hollow State Recreation Area.
Ny mpanjono avy amin'ny faritra rehetra dia mameno ny ranon'i Jackson mandritra ny vanim-potoana tsirairay. Ho fanampin'ny fahafaha-manjono any amin'ny ala Hoosier National Forest, Jackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge ary Starve Hollow State Recreation Area, Jackson County dia manana renirano roa izay ankafizin'ny mpanjono.
Ny reniranon'i White Fork White dia mivezivezy diagonaly mamakivaky ny Jackson County ary manome teboka fidirana ho an'ny daholobe manerana ny faritany, izay azon'ny clicking this link. Ny reniranon'i Muscatatuck dia mifanila amin'ny tanànan'i Vernon sy Washington ary koa ny Faritra Jackson sy Washington ary manana toerana fidirana ho an'ny daholobe marobe. Ireo izay mampiasa ny renirano ao amin'ny Fivondronan'i Jackson dia entanina mba hiambina ary hamaky amin'ny alalàn'ny fitsipika alohan'ny hidirany. Vakio bebe kokoa amin'ny clicking this link.
Kayaking dia fialamboly mitombo ao amin'ny County Jackson miaraka amin'ny maro mampiasa ny East Fork White River sy Muscatatuck River ho fomba hivoahana sy hizahana ny natiora. Mahazo alalana ihany koa ny kayak ao amin'ny ala-panjakana Jackson-Washington, Starre Hollow State Recreation Area ary Muscatatuck National Wildlife Refuge. Starve Hollow dia manolotra fanofana kayak aza izay azo ampiasaina amin'ny farihy mandritra ny dianao.
Saripika andiana vano fasika mandritra ny fifindra-monina isaky ny lohataona satria toerana maromaro any Jackson County no toerana ipetrahan'ny vorona. Mitsikilo voromahery sola amin'ny sidina, mijery otter renirano miara-misolelaka eny ambonin'ny vatolampy, na mijery ny serfa rehefa mitsikilo ny tontolo ambanivohitra izy ireo.
Azo antoka fa hahita toerana maro ianao hialana voly any ivelany any Jackson County!
Hemlock Bluff voajanahary hitahiry
Ala nasionaly Hoosier
Mitahiry ny natiora Knobstone Glade
Ao amin'ny havoana mihodinkodina ao amin'ny Jackson County, ny làlana dia misy lavaka sivy miaraka amin'ny tokontany 3,125 ho an'ny lehilahy ary 2,345 ho an'ny vehivavy manana par 35 ho an'ny roa. Anisan'izany ny bita fisakafoanana sy fivarotana pro. Hickory Hills Golf Club dia miorina ao amin'ny 1509 S. State Road 135 any Brownstown.
Miorina tsara amin'ny I-65, Shadowood dia misy lavaka 18 misy par 72 sy yardage 6,709. Anisan'izany ny trano fialofana, pavilion, fivarotana tsakitsaky, fivarotana pro, ary toerana fitondra mandeha fiara. Shadowood dia hita ao amin'ny 333 N. Sandy Creek Drive any Seymour.
Fitobiana any Jackson County, IN
Raha mitady toerana ho an'ny dia fitobiana manaraka ianao sy ny fianakavianao dia manolotra tranokala mahafinaritra maro i Jackson County izay mety tsara amin'ny fialan-tsasatra fohy na lavitra. Na inona na inona karazana lasy mety ho tianao, dia hosaronan'ny tranokalanay ianao.
Ny faritra fialamboly sy ny valan-javaboary dia manolotra karazana lasy telo: cabins, tranokala RV, ary tranokala primitive. Ny kabine dia mety indrindra ho an'ireo izay tia matory ao anaty na ho an'ireo izay tsy manana trano lay na RV. Ireo tranokalanay RV dia manome toerana ho an'ny mpitsidika miditra amin'ny herinaratra. Ireo tobim-pianarana taloha dia natao ho an'ny lasy nentim-paharazana, miaraka amin'ny lainy sy mahandro amin'ny afo misokatra.
Ny lasy fitobiana ampahibemaso dia misy ao amin'ny Alan'ny fanjakana Jackson-Washington or Starre Hollow State Recreation Area.
Rehefa avy nahita ny toerana fitobiana tonga lafatra ianao dia mankafy mitsangatsangana amina làlana isan-karazany manomboka amin'ny mora ka hatramin'ny henjana be. Ny mitaingin-tsoavaly dia misy amin'ny faritra maro miaraka amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny fanjakana, toy izany koa ny bisikileta an-tendrombohitra. Raha eo amin'ny fandaharam-potoana ny jono dia manana toerana isan-karazany hisafidianana ny Jackson County ary manolotra fanofana lakana, kayak ary fanofana lakana aza. Takiana ny fahazoan-dàlana ara-panjakana. Aza adino ireo mpihaza ao amin'ny fianakaviana ireo. Ny fihazana dia avela amin'ny toerana maro miaraka amin'ny fahazoan-dàlana mety. Ireo mpilomano ao amin'ny fianakaviana dia ho tia ny moron-dranomasina sy ny rano ao amin'ny Starre Hollow State Recreation Area.
Muscatatuck National Wildlife Refuge ao Seymour, IN
Nandritra ny taona maro, ireo mponina sy mpitsidika ny Fivondronan'i Jackson dia nankafy ny hakanton'ny natiora tao amin'ny Muscatatuck National Wildlife Refuge. Miaraka amin'ny faritra mando sy ala an'arivony hektara, ny mpitsidika dia manana fotoana hiaina ny any ivelany amin'ny fomba vaovao. Ny fialofana dia miorina amin'ny US 50 tsy lavitra ny làlam-be 65 ary mora idirana avy any Indianapolis, Louisville na Cincinnati.
Hetsika fandosirana ny fiainana dia
Rehefa mitsidika ny Muscatatuck Wildlife Refuge dia misy hetsika ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny fialofana, ho an'ny mpitsidika maro, ny fahafaha-mahita biby amin'ny fonenany voajanahary. Ny fialofana dia fonenan'ny karazam-borona mpifindra monina mihoatra ny 300, ao anatin'izany ny voromahery vorona sola mibontsina. Ankafizin'ny olona koa ny mijery ny zanatany otter an-toerana rehefa mihaza sy milalao amin'ny lalan'ny fialofana izy ireo. Miaraka amin'ny fijerena biby, ny mpitsidika dia mankafy mitsangatsangana amin'ireo lalana mahafinaritra, ary mitsidika ny Kabinetr'i Myers, ilay trano fitahirizana sy trano kely tamin'ny taonjato faha-20 namboarina, fananan'ny Myers Family. Ny jono, ny fihazana ary ny sary dia ny fiainana an-javaboary.
Ny fialofana koa dia misy hetsika isan-taona ao anatin'izany ny Wings Over Muscatatuck, Log Cabin Day, Take a Kid Fishing Day, Wetlands Day, hetsika Sandhill Crane ary maro hafa.
Fiarovana ny toeram-ponenana
Ny Muscatatuck Wildlife Refuge dia natsangana tamin'ny 1966 ho fialofana ho an'ny vorona mpifindra monina mba hiala sasatra sy hanome sakafo. Ny tanjony dia ny hiaro sy hamerina amin'ny laoniny ny tany sy ny lalan-drano, ahafahan'ny vorona, biby mampinono, biby mandady sy trondro miantso azy io ho fonenany.
Ireo mpitsidika manana fanontaniana momba ny hetsika ho avy, ny faritra fialam-boly sasany, na ny hetsika manokana dia tokony hifandray amin'ny Muscatatuck National Wildlife Refuge amin'ny Facebook na hiantso ny 812-522-4352.